နိုဝင်ဘာလ (၁၃)ရက်နေ့တွင် KT Care Foundation သို့ Admin,HR နှင့် Logistic Assistant အသစ်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ သူမ၏နာမည်မှာ ငုဝါလှိုင်ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုများသော လုပ်ငန်းခွင်ကို နှစ်သက်သူဖြစ်ပါသည်။ လာမည့်ဒီဇင်ဘာလတွင် သူမသည် အနောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ သင်္ချာဘာသာရပ်ဖြင့်ဘွဲ့ရမည် ဖြစ်သည်။ KT Care ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ အလုပ်မဝင်ခင်တွင် Nice Fare Travel & Tour တွင် Reservation and Cashierအဖြစ် တစ်နှစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် United Wood Industries Co.,Ltd တွင်လည်း HR & Admin Assistant အဖြစ် လေးနှစ်နီးပါးအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူမအနေဖြင့် KT Care တွင် Administrative၊ HR နှင့် Logistics ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများကို တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလုပ်ကိုင်နေသောအလုပ်၏ သဘောတရားများ၊ အလေ့အကျင့်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောကြောင့် သူမသည် KT Care တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ စိန်ခေါ်မှုအသစ်များနှင့် လေ့လာစရာအသစ်များကို နှစ်ခြိုက်သော သူမသည် အားလပ်ချိန်များတွင် စာအုပ်များဖတ်ခြင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်းနှင့် ခရီးသွားခြင်းကို နှစ်သက်သည်။
Author KTCPosted on November 20, 2019 November 18, 2019 Categories NewsmmLeaveacomment on ဝန်ထမ်းအသစ်မိတ်ဆက်
မောင်( )သည် (၄)လသားအရွယ်ရှိသော နှုတ်ခမ်းကွဲလူနာတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သူ၏မိဘများမှာ ဖောင်ရိုးချောင်းကျေးရွာ၊ ကျိုက်လတ်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နေထိုင်ကြပြီး ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါသည်။ မွေဖွားခဲ့စဉ်က နှုတ်ခမ်းကွဲနေခြင်းကြောင့် မိဘများအနေဖြင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ခွဲစိတ်ကုသရန်မျှော်လင့်ထားသော်လည်း အ သက်အရွယ်အားဖြင့် ငယ်သေးသဖြင့် ကုသနိုင်မည်မဟုတ်ဟု ထင်မှတ်ထားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် မအူပင်မြို့တွင်ရှိသော နှောင်ကြိုးမဲ့ လူမှုကူညီရေးအသင်း၏ ချိတ်ဆက်ပေးမှုကြောင့် KT Care ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် KT Care ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ထောက်ပံ့ပေးမှုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပင်လုံအထူးကုဆေးရုံကြီးတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပါသည်။ ကုသမှုခံယူခဲခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်အနေဖြင့် မောင်( )၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေမှာ ယခင်နှင့်မတူပဲ များစွာပြောင်းလဲတိုးတတ်ခဲ့ပါသဖြင့် မိဘဆွေမျိုးများအနေဖြင့် ကြည်နူးဝမ်းသာရပါသည်။
Author KTCPosted on November 18, 2019 November 18, 2019 Categories NewsmmLeaveacomment on နှုတ်ခမ်းကွဲခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်သွားသူ
KT Care ဖောင်ဒေးရှင်မှ ပညာသင်ဆု ရရှိထားသူ မနွေးနွေးနိုင်သည် ငပုတောမြို့နယ် ဇာတိဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် လက်ရှိတွင် ပုသိမ်တက္ကသိုလ်၌ မြန်မာစာဒုတိယနှစ် တက်ရောက်နေပါသည်။ သူမ၏ မိသားစုတွင် ကျောင်းနေကလေး(၃)ယောက်ရှိပြီး ဝင်ငွေရရှိသူမှာ တစ်ဦးတည်းဖြစ်သည့်အတွက် တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ရန် အခက်အခဲ တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ မိမိသူငယ်ချင်းများ တက္ကသိုလ်တက်ရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု တွေးကာ စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ရသည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ KT Care ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်အကြောင်း သိရှိသောအခါ KT Care၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် တက္ကသိုလ်သို့တက်ရန် အခွင့်အရေးရှိသည်ဟု စဉ်းစားလိုက်မိသည်နှင့် သူမပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။ KT Care ၏ ရည်ရွယ်ချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော အခွင့်အလမ်းနည်းသောလူငယ်များအား သူတို့၏အိပ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကူညီပံ့ပိုးပေရန်ဟူသော ဆောင်ပုဒ်နှင့် အညီ သူမသည်ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်၏ ချီးမြှင့်ခံရသူတစ်ယောက်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ KT Care ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် သူမ၏ နေထိုင်စရိတ်၊ အစားအစာနှင့် ကျောင်းပစ္စည်းများအတွက် အခကြေးငွေကို လွယ်လွယ်ကူ ပေးဆောင်နိုင်နေသည့်အတွက် KT Careအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် “ အနာဂတ်မှာ KT Care ကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးချင်တယ်” ဟုလည်း ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
Author KTCPosted on November 18, 2019 November 18, 2019 Categories NewsmmLeaveacomment on KT Careမှ ပညာသင်ဆု ရရှိထားသူ
Author KTCPosted on November 15, 2019 November 15, 2019 Categories NewsmmLeaveacomment on KT Care မှ ပညာသင်ဆု ရရှိထားသူများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ
KT Care ဖောင်ဒေးရှင်း၏ကိုယ်စား စီမံကိန်းအရာရှိနော်အိအိချောသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်၌ Takashima စက်ရုံတွင် မွမ်းမံသင်တန်းတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤသင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယခင်သင်တန်းများမှ ဆွေးနွေးခဲ့သော ခေါင်းစဉ်များကို ပြန်လည်အမှတ်ရစေရန်နှင့် စက်ရုံမှ PE(ပြန်လည်ပညာပေးသူများ)၏ သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး နားလည်မှုကို စစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤသင်တန်းတွင် အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာများဖြစ်သည့် မျိုးဆက်ပွားကင်ဆာ၊ မိုးရာသီတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သောရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါနှင့် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတို့ ဖြစ်ပွားသည့်အကြောင်းရင်းများနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းတစ်လျောက် သင်တန်းသားများမှ တက်ကြွစွာနှင့်စိတ်အားထက်သန်စွာ ပါ၀င်ခဲ့ကြပါသည်။
Author KTCPosted on November 4, 2019 Categories NewsmmLeaveacomment on KT Care Foundationမှ Takashima စက်ရုံတွင် သင်တန်းပေးခဲ့ခြင်း
တစ်နယ်တစ်ကျေးမှ လာရောက်၍ ရန်ကုန်မြို့တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော (သို့) အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသော လူငယ်၊လူရွယ်များအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိစေရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် KT Care Foundation မှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ တက်ရောက်လိုသည့် လူငယ်၊လူရွယ်များကို ပံ့ပိုးပေးမည့် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ပါဝင်စားသော လူငယ်၊လူရွယ် များရှိပါက မိမိတက်လိုသော သင်တန်းကျောင်းအမည်၊ သင်တန်းတက်ရောက်ရမည့်ကာလနှင့် သင်တန်းကြေး ကုန်ကျစရိတ်များကို တင်ပြ၍ အောက်ဖော်ပြပါလျှောက်လွှာတွင် ဖြည့်စွက်ပြီး info@ktcare.org (သို့) KT Care Foundation၏ Messengerသို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။လျှောက်လွှာများကို ၂၀၁၉၊နိုဝင်ဘာလ(၃၀)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပေးပို့ရမည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09894888497,09894888498 သို့မဟုတ် info@ktcare.org သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
လျှောက်လွှာရယူရန် Link >>>> http://bit.ly/VocationalTrainingScholarship
(လျှောက်လွှာမတင်ခင်တွင် အောက်တွင်ပူးတွဲဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို သေချာဖတ်ကြည့်ရန်)
၁။ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
၂။ ဧရာ၀တီတိုင်းဇာတိဖြစ်သူကို ဦးစားပေးမည်။
၃။ ပညာ အရည်အချင်းကန့်သက်ချက်မရှိ ။
၁။ လျှောက်လွှာဘယ်လိုယူရမလဲ ?
– လျှောက်လွှာယူရန် ဖော်ပြထားသော Link ထဲဝင်ပြီး ဒေါင်းလုပ် ဆွဲ၍ ရယူပါ (သို့) Facebook Post တွင် ပူးတွဲပါရှိသော လျှောက်လွှာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
– KT Care Foundation Email Address – info@ktcare.org သို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
– အီးမေးလ်အသုံးပြုရန် အဆင်မပြေပါက KT Care Foundation Facebook Page – Messenger မှတဆင့် ပို့ပေးနိုင်ပါသည်။
၃။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းဆိုတာ ဘာလဲ?
သင်တန်းဥပမာများ- ကားဝပ်ရှော့၊ စက်ပြင်သင်တန်း၊ ဖုန်းပြင်သင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်း၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသင်တန်း၊ အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း၊ မုန့်လုပ်သင်တန်း၊ စားဖိုမှူးသင်တန်း၊ ပန်းထိမ်၊ပန်းရံ သင်တန်း၊ ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်း
(အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော သင်တန်းများအပြင် အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများကိုပါ ထည့်သွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်)
၃။ သင်တန်းအတွက် ဘယ်လို ပံ့ပိုးပေးမှာလဲ ?
– သင်တန်းတက်ခွင့်ရသူသည် မည်သည့်ဒေသတွင် တက်ရောက်ရသည်ဖြစ်စေ၊ KT Care Foundation မှ သက်မှတ်ထားသော သင်တန်းကြေးတစ်မျိုးကိုသာ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သည်။
၄။ KT Care Foundation လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ် ?
– အမှတ်- A4/5, အနော်ရထာအိမ်ရာဝင်း ၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွက်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း- 09894888497,09894888498
၅။ သင်တန်းပြီးမြောက်အောင်မြင်ပါက KT Care Foundation သို့ ဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲ ?
၆။ လျှောက်လွှာတင်ပြီး မည်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း အကြောင်းပြန်မှာလဲ?
– ဖောင်များကို သေချာစီစစ်ပြီး (၃)ပတ်အတွင်း ပြန်လည်အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
၇။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သင်တန်းပြီးဆုံးအောင် မတက်ခဲ့ပါက KT Care Foundation ကို ဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးရမလဲ ?
– KT Care မှ ထောက်ပံ့ပေးထားသော သင်တန်းကြေး အတိုင်းအပြည့်အ၀ ပြန်လည်ပေးသွင်းရမည်။
Author KTCPosted on November 1, 2019 November 1, 2019 Categories NewsmmLeaveacomment on သက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းတက်ရောက်လိုသူများအတွက်ထောက်ပံ့မှုအစီအစဥ်